Kolontsaina ao amin'ny Repoblikan'i Kôngô - Wikipedia
Kolontsaina ao amin'ny Repoblikan'i Kôngô
Sarisokitra an' ny foko Bembe
Ny kolontsaina ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô dia kolontsaina manan-karena izay iainan' ny mponina 5 000 000 any ho any (tamin' ny 2017), noho ny fananan' io firenena io velaran-tany midadasika sy noho ny toerana misy ny taniny, izay mivelatra hatrany amin' ireo fatrana any amin' ny lemak' i Niari ka hatrany amin' ny ala mando any avaratra, hatrany amin' ny ony lehibe Congo ka hatrany amin' ireo tendrombohitra mikintoantoana sy mideza ary rakotra ala any Mayombe, ary hatrany amin' ny tora-pasika mirefy 170 km any amin' ny morontsiraky ny Ranomasimbe Atlantika. Ny fisian' ny foko maro izay samy nanana ny rafitra ara-pôlitikany tany aloha (toy ny Empira Kôngô, ny fanjakan' i Lôando, ny fanjakana Teke, ny fitondran' ireo loham-poko tao avaratra) dia nahatonga ity firenena ity hanana kolontsaina nentim-paharazana samihafa sy zavakanto tranainy: ny sarisary misy fantsika Vili, ny sarivongana madinika bembe, ny saron-tavana an' ny Pono (Punu) sy an' ny Koele (Kwele), ny fitoeran-tsisan-javatra navelan' ny maty an' ny Kôta (Kota), ny sary odin' ny Teke (Teke), ny toeram-pandevenana any amin' ny tanin' ny Lary (Lari). Manampy azy ireo koa ireo zavatra goavana naorina tamin' ny andron' ny fanjanahan-tany.
2 Ny fiteny
2.2 Ireo fiteny teratany
3 Ny fivavahana
4 Ny fampianarana
5 Ny asa soratra sy ny zavakanto
5.1 Ny zavakanto
5.2 Asa soratra
Miisa 3 900 000 any ho any ny mponina ao amin’ ny Repoblikan’ i Kôngô tamin’ ny taona 2008. Ao amin’ ny tapany atsimon’ ny Repoblikan’ i Kôngô no ivangongoan’ ny mponina indrindra, dia ny faritra onenan’ ny Bakôngô.
Ny lehibe indrindra amin’ ny foko ao dia ny Bakôngô (Bakongo) izay misy 45 %n’ ny mponina, monina eo anelanelan’ i Brazzaville sy ny alanana (moro-dranomasina). Ny Bateke (Batéké) izay mahatratra 20 %n’ ny mponina dia monina eny amin’ ireo lembalemba anelanelan’ i Brazzaville sy ny ala. Ny Mbôsy (Mboshi) izay mahatratra 10 %n’ ny mponina dia monina amin’ ny ala ao avaratra. Ny Sanga (Sangha) dia monina ao amin’ ny faritra misy ala ao avaratra eo anelanelan’ i Sangha sy i Oubangui izay ahitana koa Pigmea baka (Baka) vitsivitsy.
Ny antsasa-manilan’ ny mponina ao amin’ ny Repoblikan’ i Kôngô dia monina an-tanàndehibe. Ny lehibe indrindra amin’ ireo tanàna ireo dia i Brazzaville, i Pointe-Noire, i Loubomo ary i Nkayi. Tamin’ ny taona 1990 i Brazzaville dia misy mponina 760 300; i Pointe-Noire misy mponina 387 800; i Loubomo misy mponina miisa 62 100; ary i Nkayi misy mpoina miisa 40 100.
Ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialin’ ny Repoblikan’ i Kôngô nefa ny mponina tsirairay ao dia miteny amin’ ny fitenin’ ny vondrona misy azy, nefa amin’ ny ankapobeny dia io no fiteny ifaneraserana ao amin’ ny faritra misy azy amin’ ny sehatry ny varotra sy ny hafa.
Tamin' ny taona 2010 dia nahatratra ny 56 %n' ny mponina kôngôley ny mpiteny frantsay, ka ny 78 %n' izany dia mihoatra ny 10 taona, izany no maha laharana faharoa ny Repoblikan’ i Kôngô manerana an' i Afrika aorian' i Gabôna, raha ny isan-jato no heverina. Ny 88 %n' ny mponina ao Brazaville mihoatra ny 15 taona dia milaza fa mahay miteny sy manoratra frantsay.
Ireo fiteny teratany[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny lingala, ohatra, dia tenenina ao amin’ ny faritra avaratra sy ao atsinana, manaraka ireo renirano, ao amin' ny renivohitra sy ny manodidina. Ny lalàm-panorenana kôngôley dia manao ny fiteny lingala sy kitoba ho fitenim-pirenena ifaneraserana. Ao koa ny fiteny mônôkotoba izay tenenina ao atsimo.
Ny Repoblikan’ i Kôngô dia firenena anjakan’ ny fampifangaroana fivavahana.
Mihoatra ny antsasaky ny mponina manontolo no mitonon-tena ho Kristiana, ka Katôlika ny 35 hatramin' ny 50 %n’ ny mponina ary Prôtestanta sy Kristiana hafa ny 15 hatramin' ny 20 %. Ny sekta mpampifangaro fivavahana no tena miely kokoa. Ny fantatra indrindra amin’ ireo sekta ireo dia ny kimbangisma izay nanohitra ny fanjanahan-hany.
Ny animisma sy ny fivavahan-drazana dia mbola be mpanaraka ao avaratra. Ankehitriny dia ny 50 %n' ny mponina no manaraka ny fivavahan-drazana.
Any amin’ ny faritry ny fatrana sy amin’ ny tanan-dehibe no ahitana ny fivavahana silamo. Ny 2 %n' ny Kôngôley dia Miozolmana.
Maimaimpoana sady tsy maintsy atao ny fandefasana hianatra ny zaza eo anelanelan’ ny 6 sy 15 taona. Tamin’ ny taona 1995 dia 75 %n’ ny Kôngôley no mahay mamaky teny sy manoratra. Ao Brazzaville no ahitana ny oniversite Marien-Ngouabi izay naoria tamin’ ny taona 1961 sady mahazaka mpianatra analiny.
Ny asa soratra sy ny zavakanto[hanova | hanova ny fango]
Ny zavakanto[hanova | hanova ny fango]
Ny zavakanto kôngôley dia fantatry ny Eorôpeana tamin’ ny andron’ ireo tobim-barotra voalohany. Misy ny fisokirana ny vangin’ elefanta mba hiendrika tehim-boninahitra na oron' elefanta na sarivongana madinika tao amin’ ny fanjakan’ i Loango (Loango). Ny saron-tava kôngôley dia niteraka ny angam-panahin’ ny mpamorona zavakanto tamin’ ny Andro Vaovao tao Eorôpa. Ny sarivongana madinika bakôngô, izay tsatotsatohan’ ny fantsika na ipetahan’ ny fitaratra eo amin’ ny kibony mba handroaka ny vitan-dratsy, dia manaingo ny toeram-piasan’ ny mpanao hosodoko eorôpeana tamin’ ny fiandohan’ ny taonjato faha-20 (isan’ izany i Braque sy i Picasso), toraka izany koa ireo saron-tava fisaka an’ ny Koele (Kwele) voasoratsoratra amin’ ny loko maro.
I Sylvain Bemba, izay niaina tamin’ ny taona 1934 hatramin’ny 1988, sy i Sony Labou Tansi, izay velona tamin’ ny taona 1947 hatramin ’ny 1995, no mpanoratra ngezalahy malaza tamin’ ny fitsikerana ny fanjanahan-tany sy ny fitondrana nandimby izany.
Ankehitriny dia manana mpanoratra malaza aty Afrika sy amin' ny tontolo miteny frantsay ny Repoblikan' i Kôngô: i Alain Mabanckou, i Jean-Baptiste Tati Loutard, i Gabriel Okoundji, i Jeannette Balou Tchichelle, i Henri Lopes ary i Tchicaya U Tam'si.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolontsaina_ao_amin%27ny_Repoblikan%27i_Kôngô&oldid=1001264"
Voaova farany tamin'ny 10 Febroary 2021 amin'ny 04:56 ity pejy ity.